अध्याय २८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जब तैँले समय अत्यन्तै क्षणिक छ र पवित्र आत्‍माको कार्य तँलाई त्यति महान् आशिषहरू प्राप्त गर्न र चम्किरहने सूर्य, राज्यका राजा हुनुहुने ब्रह्माण्डका राजा, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर ग्रहण गर्न दिँदै अघि बढेको छ भन्‍ने देख्छस्—यो सबै मेरो अनुग्रह र कृपा हो। तँलाई मेरो प्रेमबाट अलग गराउन सक्‍ने अरू के छ र? ध्यान दिएर मनन गर्, उम्कने प्रयास नगर्, हरेक क्षण मेरो सामने शान्त भई प्रतीक्षा गर् र सधैँ बाहिर भौतारिने नगर्। तेरो हृदय मेरो हृदयको नजिक हुनुपर्छ, र जे भए पनि, अन्धाधुन्ध वा स्वेच्‍छाले काम नगर्। तैँले मेरो इच्‍छालाई नै हेर्नुपर्छ, मैले जे इच्‍छा गर्छु त्यही गर्नुपर्छ, र मैले इच्‍छा नगर्ने कुरालाई त्याग्‍ने अठोट गर्नुपर्छ। तैँले आफ्‍ना भावनाहरूको आधारमा काम गर्नु हुँदैन, बरु मैले जस्तै तेरा बाबुआमाको लागि समेत कुनै भावनाविना धार्मिकताको अभ्यास गर्नुपर्छ। तैँले सत्यताअनुरूप नरहेका सबै कुरालाई त्याग्‍नुपर्छ र तैँले मलाई प्रेम गर्ने शुद्ध हृदयसहित आफूलाई मेरो लागि चढाउनुपर्छ र अर्पण गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति, घटना, वा कुराको नियन्त्रणमा नबस्; जबसम्‍म कुनै कुरा मेरो इच्‍छाअनुरूप हुन्छ, तबसम्‍म यसलाई मेरा वचनहरूअनुसार अभ्यास गर्। नडरा, किनभने मेरा हातले तँलाई साथ दिन्छ, र म तँलाई दुष्ट काम गर्नेहरूबाट टाढा राख्‍नेछु। तैँले आफ्‍नो हृदयलाई रक्षा गर्नुपर्छ, सधैँ मभित्रै रहनुपर्छ, किनभने तेरो जीवन ममा निर्भर भएर जिउँछ; यदि तँ मलाई छोडेर गइस् भने, तँ तुरुन्तै सुक्‍नेछस्।
तैँले यी आखिरी दिनहरू हुन् भन्‍ने कुरालाई जान्‍नुपर्छ। गर्जने सिंहजस्तै दियाबलस शैतान मानिसहरूलाई निल्‍नको लागि खोजी गर्दै यता-उता घुम्छ। अब सबै प्रकारका विपत्तिहरू आइपर्छन्, र हरेक प्रकारका दुष्ट आत्माहरू छन्। म मात्रै साँचो परमेश्‍वर हुँ; म मात्रै तेरो शरणस्थान हुँ। अब मेरो गुप्त स्थानमा, मभित्र मात्रै लुक्‍ने बाहेक तैँले केही पनि गर्न सक्दैनन्, र तँमाथि विपत्तिहरू आइपर्नेछैनन्, र तेरो पालको नजिक कुनै पनि विपत्ति आउनेछैन। तँ अझै बढी मेरो नजिक आउनुपर्छ र गुप्त स्थानमा मसँग सङ्गति गर्नुपर्छ; अरूसँग हल्‍का रूपले सङ्गति नगर्। तैँले मेरा वचनहरूको अर्थलाई बुझ्‍नैपर्छ—तँलाई सङ्गति गर्ने अनुमति छैन भनेर मैले भनिरहेको छैन, तर तँसँग अझै पनि भेदशक्ति छैन भनेर भनिरहेको छु। यस अवधिमा, दुष्ट आत्‍माहरूको काम छ्यासछ्यासती हुन्छन्। तँलाई सङ्गति दिनको लागि तिनीहरूले सबै किसिमका मानिसहरूको प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूका शब्‍दहरू मनोहर सुनिन्छ, तर तीभित्र विष हुन्छन्। ती त चिनीको आवरण हालिएका गोली हुन् अनि तैँले थाहा पाउनुअघि, तिनीहरूले तँभित्र तिनीहरूको विष हालिदिनेछन्। आजका धेरैजसो मानिसहरू अस्थिर छन्, मानौं तिनीहरू मातेका छन् भन्‍ने कुरालाई तैँले जान्‍नुपर्छ। जब तैँले अरूसँग तेरा कठिनाइहरूका बारेमा सङ्गति गर्छस्, त्यस बेला तिनीहरूले तँलाई बताउने कुरा नियमहरू र धर्मसिद्धान्त मात्रै हुन्, र यो मसँगै सीधै सङ्गति गरेको जस्तो राम्रो हुँदैन। मेरो अघि आइज र तँभित्र भएका पुराना कुराहरूलाई निकाल्; मेरो लागि तेरो हृदय खोल् अनि तेरो लागि मेरो हृदय अवश्य नै प्रकट गर्नेछु। तेरो हृदय मेरो अघि लगनशील हुनैपर्छ। अल्छी नबन्, तर मकहाँ बारम्‍बार आइज्—तेरो जीवन वृद्धि हुने सबैभन्दा छिटो तरिका यही हो। तँ मभित्र जिउनुपर्छ र म तँभित्र जिउनेछु, अनि तँलाई सबै कुरामा अगुवाइ गर्दै म तँभित्र राजा बन्‍नेछु, र तँ राज्यको भाग बन्‍नेछस्।
तँ जवान छस् भन्दैमा आफूलाई कम नसम्झी। तैँले आफैलाई ममा समर्पित गर्नुपर्छ। मानिसहरू बाहिरी रूपमा कस्तो देखिन्छन् भन्‍ने कुरालाई म ध्यान दिँदिन, न त तिनीहरू कति वर्षका भए भन्‍ने कुरालाई नै ध्यान दिन्छु। तिनीहरूले मलाई इमानदार रूपमा प्रेम गर्छन् कि गर्दैनन्, र तिनीहरूले मेरो मार्ग पछ्याउने र अरू सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर सत्यतालाई अभ्यास गर्ने गर्छन् कि गर्दैनन् भन्‍ने कुरालाई मात्रै म ध्यान दिन्छु। भोलिको दिन कस्तो हुनेछ भनेर चिन्ता नगर्, न त भविष्य कस्तो हुनेछ भनेर नै। जबसम्‍म तँ हरेक दिन मेरो भरोसामा जिउँछस्, तबसम्‍म म अवश्य नै तँलाई डोर्‍याउनेछु। “मेरो जीवन अत्यन्तै सानो छ, म त केही पनि बुझ्दिन” भन्‍ने विचारमा लागी नराख्, यो त शैतानले पठाएको विचार हो। सधैँ मेरो नजिक आउनको लागि, बाटोको अन्त्यसम्‍मै मेरा पाइलाहरूलाई पछ्याउनको लागि तैँले तेरो हृदय मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। जब तैँले मेरा हप्की र चेतावनीका वचनहरू सुन्छस्, तुरुन्तै ब्यूँझेर अघि दौडी; नरोकिकन मेरो नजिक आइज, बगालको गतिलाई पछ्याइराख, र तेरो नजर अगाडि लगा। मेरो उपस्थितिमा हुँदा, तैँले आफ्‍नो परमेश्‍वरलाई तेरो सारा हृदय र प्राणले प्रेम गर्नुपर्छ। सेवाको मार्गमा, बारम्‍बार मेरा वचनहरूलाई ध्यान दे। अभ्यास गर्ने क्रममा, कमजोर हृदयको नबन्—पुरुष बालकको सङ्कल्प र दृढ निश्‍चयताको साथ हृदयलाई शक्तिशाली बना; ठूलो हृदय भएको मानिस बन्। यदि तँ मलाई प्रेम गर्न चाहन्छस् भने, तैँले तँमा मैले पूरा गर्न चाहेको सबै कुरालाई ममा पूरा गर्नुपर्छ। यदि तँ मलाई पछ्याउन चाहन्छस् भने, तैँले आफूसँग भएको सबै कुरालाई, तैँले प्रेम गर्ने सबै कुरालाई त्याग्‍नुपर्छ; तँ सरल मन लिएर मेरो सामने नम्र भई समर्पित हुनुपर्छ। जथाभाबी अन्वेषण गर्ने वा विचार गर्ने नगर्, तर पवित्र आत्‍माको कार्यलाई नै पछ्याइराख्।
यहाँ, म तँलाई यो सल्‍लाह दिन्छु: मैले अन्तर्दृष्टि दिएर तँभित्र राखिदिएको सबै कुरालाई दह्रिलो गरी पक्रिराख्, अनि यसलाई निश्‍चित रूपमा अभ्यास गर्!
अघिल्लो: अध्याय २७
अर्को: अध्याय २९